DEG-DEG: Agaasimaha Ciyaaraha Juvenus Ee Fabio Paratici Uu London U Duulay Si Loo Dhamaystiro Heshiisyada Romelu Lukaku Iyo Paulo Dybala - Gool24.Net
DEG-DEG: Agaasimaha Ciyaaraha Juvenus Ee Fabio Paratici Uu London U Duulay Si Loo Dhamaystiro Heshiisyada Romelu Lukaku Iyo Paulo Dybala
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Juvenus ee Fabio Paratici ayaa u duulay magaalada London si uu wada xaajood ula yeesho maamulka Manchester City ee dhamaystiro heshiisyada isku badalasho ee Romelu Lukaku iyo Paulo Dybala.
Juventus ayaa hadda si cad ugu muuqata in ay kooxda Inter Milan ku garaacayso heshiiska Romelu Lukaku iyada oo taas badalkeeda ay Manchester United helayso fursada ay kula saxiixan karto Paulo Dybala.
Sky Sports ayaa hadda shaaciyay in agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus ee Fabio Paratici uu u safray London halkaas oo uu wada xaajood kula yeelan doono maamulka Man United iyo wakiilada Romelu Lukaku.
Suurtogalnimada ay kooxaha Manchester United iyo Juventus isku dhaafsan karaan Romelu Lukaku iyo Pualo Dybala ayaa aad u saraysa iyada oo agaasimaha ciyaaraha Juventus uu hadda diyaar u yahay in uu heshiiskan soo gaba gabeeyo.
Ilwareed ayaa sheegtay in heshiiska ciyaartoy isku badalashada kooxaha Juventus iyo Manchester United ee Lukaku iyo Dybala uu u fiican yahay sidii in uu yahay heshiis dhan oo kale.
Wararka ayaa sheegaya in wax walba ay hadda ku xidhan yihiin sida uu Pualo Dybala u aqbalo in uu Manchester United ku biiro iyada oo Fabio Paratici uu doonayo sidii uu xidiga reer Argentina ugu wareegi lahaa Old Trafford.
Wada xaajoodka ay magaalada London ku yeelan doonaan maamulka Manchester United iyo agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus ee Fabio Paratici ayaa la filayaa in ay soo gaba gabayn karaa heshiiska isku badalasho ee Lukaku iyo Pualo Dybala.
Wixii warar ah ee ka soo kordha safarka uu agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus ee Fabio Paratici uu ku tagay London iyo wixii ka soo baxa waxaad insha Allah kula soo socon doontaan wararkeena soo socda isla marka ay xaalado ka soo kordhaan.